လှချင်ရက်စက်စက်ယိုမြီးကောင်ပေါက်လေးတွေ… လှဖို့ပဖို့ ခွဲစိတ်ပြုပြင်ကြမယ်ဆိုရင်…. - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
လှချင်ရက်စက်စက်ယိုမြီးကောင်ပေါက်လေးတွေ… လှဖို့ပဖို့ ခွဲစိတ်ပြုပြင်ကြမယ်ဆိုရင်….
ဇူလိုင် 2, 2019 Teerapat Jaiprasat, M.D.
ဆယ်ကျော်သက်မြီးကောင်ပေါက် ၁၂နှစ်နဲ့ ၁၇ နှစ်ကြားလေးတွေဟာ အလှအပဆိုင်ရာ ခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုခံယူလို့ ဘယ်လိုမှ မသင့်တော်ပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာဟာ အပြည့်အဝ မဖွံ့ဖြိုးသေးတဲ့အတွက် အလှအပအတွက်လုပ်တဲ့ ခွဲစိတ်မှုဟာ ဆိုးဆိုးရွားရွားကို ဒုက္ခပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အလှအပခွဲစိတ်မှုတစ်ခုမလုပ်ခင်မှာ နောက်ပိုင်းဖြစ်လာနိုင်တဲ့အကျိုးဆက်တွေကို ထဲထဲဝင်ဝင် လေ့လာပြီး သဘောပေါက်ထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခွဲစိတ်မှုတစ်ခုချင်းစီအတွက် သင့်လျော်တဲ့ အသက်အပိုင်းအခြား၊ ခွဲစိတ်မှုအတွက် ကောင်းကောင်းဂရုစိုက်ပေးဖို့ အလှအပရေးရာခွဲစိတ် ဆရာဝန်နဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေ၊ မှန်ကန်တဲ့ ခွဲစိတ်မှုအဆင့်ဆင့်၊ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှု နဲ့ ထိရောက်မှု စတာတွေကို သေသေချာချာ သိထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အလှအပရေးရာခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုတွေဟာ ဒီနေ့ခေတ် လူကြိုက် အလွန်များနေတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပေမယ့် ဆယ်ကျော်သက်မြီးကောင်ပေါက် ၁၂နှစ်နဲ့ ၁၇ နှစ်ကြားလေးတွေဟာ အလှအပဆိုင်ရာ ခွဲစိတ်မှုခံယူလို့ ဘယ်လိုမှ မသင့်တော်ပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာဟာ အပြည့်အဝ မဖွံ့ဖြိုးသေးတဲ့အတွက် ဒီလို အလှအပအတွက်လုပ်တဲ့ ခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုတိုင်းအတွက် သေသေချာချာစဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်နဲ့ ထဲထဲဝင်ဝင် တိုင်ပင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အမှန်ကတော့ အလှအပခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုဟာ ဒီ အသက်အရွယ်အတွက် လုံးဝမသင့်တော်တဲ့အပြင် ခန္ဓာကိုယ် ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘက်မှာ ဆိုးဆိုးရွားရွားကို ထိခိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
နဖူးကို ခွဲစိတ်ပြုပြင်တယ်ဆိုတာ နဖူးပြင် မညီမညာဖြစ်နေတာ၊ နဖူးကျဉ်းတာ၊ နဖူးပြားတာ စတာတွေကို လှ သွားအောင် ပြုပြင်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နဖူးကို ကျယ်အောင်ဖြစ်ဖြစ်၊ ကျဉ်းအောင်ဖြစ်ဖြစ် လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် ဦးခေါင်းရိုး အပြည့်အဝ ဖွံ့ဖြိုးပြီးဖြစ်တဲ့ အသက် ၁၈ နှစ် နောက်ပိုင်းမှ လုပ်သင့်ပါတယ်။ ဒါမှ ကိုယ်လိုချင်တဲ့အတိုင်းရအောင် အပြည့်အဝ ပုံသွင်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မျက်လုံးလှအောင် ခွဲစိတ်ပြုပြင်တယ်ဆိုတာ မျက်ရစ်ဖော်တာတို့၊ မျက်ခွံပင့်တင်တာတို့၊ အဆီအိတ်တွေဘာတွေ ဖယ်ရှားတာတို့၊ မျက်လုံးတစ်ဝိုက်က အရေးအကြောင်းတွေ ပျောက်သွားအောင်လုပ်တာတို့ ဘာတို့ စတာတွေကို ပြောချင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေကို လုပ်လိုက်ရင် မျက်လုံးကြီးဟာ ကျယ် လာမှာဖြစ်တာမို့ အပြည့်အဝ ဖွံ့ဖြိုးပြီး ဖြစ်တဲ့ ၁၈ နှစ် အထက်ပိုင်းတွေကျမှ လုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်လုံးတစ်ဝိုက်က အတွန့်တွေ အရေးအကြောင်းတွေ ဖယ်ထုတ်တာမျိုးကတော့ အသက် ၄၅ – ၅၀ လောက်မှ လုပ်သင့်ပါတယ်။ အသက်ငယ်တဲ့အချိန် ပါးရေမှ မတွန့်သေးတာ။ ဘာလုပ်မှာတုန်း။
နှာခေါင်းလှအောင် နှာတံဖော်တာ၊ ပုံသွင်းတာ၊ ဆိုက်ကြီးပြီး ပွနေလို့ ချုံ့တာ စတာတွေဟာ အသက် ၂၀ နောက်ပိုင်းမှ လုပ်ကြပါ။ နှာနုရိုးက အဲဒီအရွယ်လောက်မှ ပြုလို့ ပြင်လို့ အဆင်ပြေမှာပါ။ နို့မို့ဆို ခွဲပြီးလည်း နှာခေါင်းအသစ်က ပုံပြောင်းမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ပါးစပ်ပေါက်ကို မျက်နှာနဲ့လိုက်အောင် နှုတ်ခမ်းအလှပြုပြင်တယ်ဆိုတာ နှုတ်ခမ်းထူနေလို့ ပါးပစ်တာ၊ အပေါ်နှုတ်ခမ်းလေး လန်လန်လေးဖြစ်သွားအောင်လုပ်တာ၊ နှုတ်ခမ်းလေးကို ဖူးဖူးငုံငုံလေးဖြစ်အောင် လုပ်တာ စတာတွေကို ၁၈ နှစ် ကျော်မှ လုပ်ပါလို့။
မေးရိုးကို မျက်နှာလေး သွယ်သွားအောင်၊ ဗွီရှိပ်လေးဖြစ်သွားအောင် လုပ်ချင်ရင် အသက် ၂၀ ကျော်တဲ့အထိ စောင့်ရပါမယ်။ ၂၀ ကျော်မှ မေးရိုးက ပြုပြင်လို့ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေးစေ့လေး အရွယ်အစားကြီးအောင်ဖြစ်ဖြစ်၊ အနေအထားပြင်တာဖြစ်ဖြစ် လုပ်ချင်ရင် ၁၈ နှစ် ကျော်မှ ကောင်းပါတယ်။ အသက် ၁၈နှစ်နောက်ပိုင်းမှာ မေးရိုးက ထပ်ကြီးလာတော့မှာ မဟုတ်လို့ပါပဲ။ ပြီးတော့ အရိုးတွေကို နေရာရွှေ့ဖို့အတွက်ကလည်း ဒီအသက်လောက်မှ အန္တရာယ်ကင်းမှာမို့လို့ပါ။
ရင်သားဖွံ့ဖြိုးဖို့ ခွဲစိတ်ချင်တယ်ဆိုရင် အသက် ၂၅ နှစ်အထက်မှ လုပ်သင့်ပါတယ်။ ကြီးကောင်ဝင်တဲ့ရွယ် (၁၂ – ၁၇) မှာတော့ လုပ်ဖို့ မသင့်တော်ပါဘူး။ ဘာလို့ဆို ရင်သားကို ခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုဟာ အပျိုဖော်ဝင်စမှာ ရော မိခင်နို့တိုက်ကျွေးရာမှာပါ သက်ရောက်ထိခိုက်မှုရှိလိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ငယ်သေးတော့ ဟိုမုန်း တွေနဲ့ ကိုယ်လက်အင်္ဂါတွေအပြည့်အဝ မဖွံ့ဖြိုးသေးဘူးလေ။
ဝမ်းဗိုက် – ဗိုက်မစူအောင် ခွဲထုတ်ပြုပြင်တာတို့ ဘာတို့ဆိုကတော့ ၃၅ နှစ်ကျော်မှ လုပ်သင့်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေအတွက်ဆိုရင် ကလေးထပ်မယူဖို့ ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုခွဲစိတ်ပြီးမှ ကိုယ်ဝန်ယူ မယ်ဆိုရင် သန္ဓေသားအတွက် ဝမ်းခေါင်းဟာ ကျဉ်းနေမှာဖြစ်လို့ သူ့ရဲ့အချင်းအိတ်ဟာလည်း ရှုံ့တွ နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ နို့တိုက်မိခင်များအတွက် ရင်သားပင့်တင်တဲ့ ခွဲစိတ်မှုမျိုးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် ကလေး နို့ဖြတ်ပြီး တစ်နှစ်ကျော်မှ လုပ်သင့်ပါတယ်။
မသင့်တော်တဲ့ အသက်အရွယ်မှာ ခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုတွေ လုပ်လိုက်ရင် အောက်ပါအချီးနှီးဖြစ်မှုတွေကလွဲလို့ ဘာ အကျိုးကျေးဇူးမှ ရလာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
အချိန်နဲ့ငွေ အချီးနှီးဖြစ်မှု – ခွဲစိတ်မှုတွေ အကြိမ်ကြိမ်လုပ်ရတယ်၊ အခါခါ ပြင်ရတယ်၊ မူရင်း ရှိပြီးသားတွေကို ဖယ်ထုတ်ပစ်ပြီး အသစ်တွေနဲ့ အစားထိုးရတယ်၊ တစ်ခါ လုပ်ပြီးတိုင်း အကြာကြီး အနားယူရတယ်၊ အနှစ်ချုပ်လိုက်ရင် ပိုက်ဆံတွေ အများကြီး ကုန်တယ်။ အချိန်တွေ အများကြီး ပေးလိုက်ရပါတယ်။
ကိုယ်လက်အင်္ဂါတွေ အပြည့်အဝ မဖွံ့ဖြိုးတော့ခြင်း – လှဖို့အတွက် ခွဲစိတ်ပြုပြင်ရတာ ဖြစ်လို့မို့လို့ ရှိပြီးသားအစိတ်အပိုင်းတွေကို ဖယ်ထုတ်ပစ်ရတယ်။ ပြင်ပပစ္စည်းတွေကို ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို ထည့်ရတယ်။ ကိုယ်တွေက ငယ်သေးတဲ့အတွက် ပြည့်ပြည့်၀၀ မဖွံ့ဖြိုးသေးတဲ့အခါ အဲဒီပစ္စည်း တွေက ဖွံ့ဖြိုးရမယ့် အစိတ်အပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ တစ်သျှူးတွေ၊ အရိုးတွေအပေါ်ကို ဖိထားသလိုဖြစ် နေပါတယ်။ သူတို့ လိုအပ်သလို ဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားနိုင်စေဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
ကြိမ်ဖန်များစွာနာကျင်နေမှု – ငယ်ရွယ်နုနယ်သေးတဲ့အချိန်မှာ ခွဲစိတ်ပြုပြင်လိုက်တယ်ဆိုရင် ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း ဖွံ့ဖြိုးမှုက မရပ်သေးတော့ ဆက်ပြီး ကြီးလာနေဦးမှာပဲဖြစ်လို့ ခွဲထား တာနဲ့ သူကြီးလာတာနဲ့ ပဋိပက္ခဖြစ်လာတာမို့လို့ နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်ခွဲရပြန်ရော။ လူကြီးတွေ တစ်ခါ နာရင် ကိုယ်က နှစ်ခါ နာတာပေါ့။
အဲဒီတော့ရင် – ကိုယ့် ကလေး၊ ဆယ်ကျော်သက် ဒါမှမဟုတ် ကိုယ် ကိုယ်တိုင် အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် လှဖို့ ပဖို့ ခွဲစိတ်ပြုပြင်တော့မယ်လို့ စဉ်းစားရင် မလုပ်ခင်မှာ လုပ်ရမယ့်အဆင့်တွေကို သေသေချာချာ လေ့လောစေချင် ပါတယ်။ လုပ်ပြီးနောက်ပိုင်း ဖြစ်လာမယ့် အကျိုးဆက်တွေကိုလည်း နားလည် သဘောပေါက်ထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခွဲစိတ်ရာမှာ ဘယ်လို အဆင့်မျိုးတွေပါဝင်မယ်၊ ဒါတွေကို ခံနိုင်မယ် မခံနိုင်ဘူး၊ ကိုယ့် အသက်အရွယ်နဲ့ သင့်၏ မသင့်၏ စတာတွေ စဉ်းစားရပါမယ်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ အမှန်တကယ် တတ်ကျွမ်းတဲ့ ပလတ်စတစ် အလှအပရေးရာ ခွဲစိတ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီးတွေနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ဆန်းစစ်ပြီးမှ ကုသမှုခံယူရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အသက်မပြည့်သေးတဲ့ ကလေးတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ ဘယ်လို ခွဲစိတ်မှုမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် မိဘအုပ်ထိန်းသူတွေရဲ့ သဘောတူ ခွင့်ပြုချက်ယူဖို့ လိုအပ်ပါတယ် ဆိုတာလေးကိုလည်း ထပ်လောင်း သတိပေးလိုက်ရပါတယ်။
လှချင်ရက်စက်စက်ယိုမြီးကောင်ပေါက်လေးတွေ… လှဖို့ပဖို့ ခွဲစိတ်ပြုပြင်ကြမယ်ဆိုရင်…. အလှအပရေးရာခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုတွေဟာ ဒီနေ့ခေတ် လူကြိုက် အလွန်များနေတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပေမယ့် ဆယ်ကျော်သက်မြီးကောင်ပေါက် ၁၂နှစ်နဲ့ ၁၇ နှစ်ကြားလေးတွေဟာ အလှအပဆိုင်ရာ ခွဲစိတ်မှုခံယူလို့ ဘယ်လိုမှ မသင့်တော်ပါဘူး။